merolagani - एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन?
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन?
Jul 31, 2020 05:18 PM Merolagani
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले शुक्रबारदेखि बिक्रीमा ल्याइएकाे आइपीओमा पहिलो दिन ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ।
बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार साँझ साढे ४ बजेसम्ममा २३ करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ८१ हजार २३० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ।
कम्पनीले शुक्रबारदेखि प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका कुल ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले निष्काशन गरेको ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६९ हजार ९०२ कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँट गरिएको छ भने २ प्रतिशत अर्थात ६७ हजार ९६१ किता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ३१ लाख ६० हजार १८३ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका बाहेक मेरो शेयर सफ्टवेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आईपीओलाई क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी केयर रेटिङ्गस् नेपालले केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ।